Faah-faahino dheerad ah oo ka soo baxaya qarax ka dhacay duleedka Afgooye, Sawirro – Hornafrik Media Network
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax is-miidaamin ahaa oo maanta ka dhacay bar-koontorool oo ciidamada booliiska Soomaaliya ay ku leeyihiin, halka loo yaqaano Baar-Ismaaciil oo ku yaalla duleedka waqooyi ee degmada Afgooye.
Qaraxa waxaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, isla markaana uu waday ruux nafti halige ah, waxaana lagu weerar goob ay ciidamadu ku qaadaan canshuurta oo u dhaw Bood-boodka.
Sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in qaraxa bartilmaameedkiisu uu ahaa Injineero Turkish ah oo ku howlanaa dhismaha wadada xariirisa Muqdisho iyo Afgooye, kuwaas oo sida la sheegay qaarkood lagu dilay qaraxa inkastoo aysan jirin cid faahfaahin dhab ah ka bixisay khasaaraha ka dhashay qaraxaas.
Khasaaraha ugu badan ayaa waxaa la sheegay in qaraxaas uu ka soo gaaray ciidankii booliska ahaa ee ku sugnaa goobta, welina wax faahfaahin ah dowladdu kama bixin qaraxaas.
Taliye ku xigeenka ciidanka Haramcad ee uu Turkigu tababaray oo lagu magacaabo Cabdiwali Fanax iyo qaar ka mid ah Injineeradii Turkiga ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qaraxaas, inkastoo si rasmi ah aanaa u xaqiiji karin arintaas, hadana warbaahinta qaar ayaa qortay.
In la ogaado xaaladda dhabta ah ee ka jirta goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa aad u adag, waxaana xirtay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya oo hakad geliyey isu socodka dadkii isticmaalayey wadadaas, oo badankood u kala goosha Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose.
28-kii bishii hore ee December ayaa qarax weyn oo bartilmaameedkiisa lagu sheegay Injineero Turki ah, waxa uu ka dhacay Isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho, waxaana halkas lagu dilay 81 qof oo u badnaa dad shacab ah, iyadoo lagu dhaawacay in ka badan 140 ruux oo kale.
Maxaa looga hadlayaa shirka Dani iyo Axmed Madoobe uga socda Boosaaso?